3-sano kadib Maamul xumada ka jirta xafiiska Madaxweyne Shariif !!!! | Calanka Somalia
← Warar ku saabsan masuuliyiin ka tirsan Q/Midoobay oo kulamo xasaasi ah la qaatay labada garab ee baarlamanka Somalia
Xildhibaanada & Siyaasihiinta Soomaalida oo Dibadbax Balaaran kadhigaayo Muqdisho”Sababtu maxay tahay? →
3-sano kadib Maamul xumada ka jirta xafiiska Madaxweyne Shariif !!!!
March 13, 2012 -Waa qeyb ka mid maamul xumada ka jirta xafiiska madaxweynaha Somalia Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaana source-ga ugu badan aan ka helnay rug cadaa badan oo kasoo shaqeeyay xafiiska madaxweynaha oo haatan ku sugan wadanka Kenya.
– Ujeedka Madaxweyne Shariif
– Yuu ka shidaa qaataa madaxweynaha?
– Waa kuma Maxamed Cali Ameeriko?
– Arinta ka mid noqaanshaha East African Commercial
– Yaa mudanaa in warqada uu ka saxiixo Madaxweyne Kibaki?
– Kalsoonida Maxamed Cali Ameerica
– Hordhac –
Wixii ka danbeeyay markii dalka Somalia uu burburay beesha caalamka wax ay Somalia u aqoonsatay wadan aan la heyn kala danbeyn dadkiisana aysan dooneenin in ay wax qabsadaan waxa ayna beesha caalamka ku waalatay in Somalia ay galiso nidaamka KMG loo yaqaano wixii ka danbeeyay shirkii Carta lagu qabtay ee madaxweyne loogu soo doortay C/qaasim Salaad.
Hadafku waxa uu ahaa in lagu ogaado sida ay ku baran karaan ama ay ku maareen karaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed nidaamkaasi KMG waxa uuna ahaa mid soo soconayay in ka badan 10-sano oo dalka uu ahaa mid nidaamkaasi ku jiray.
– Ujeedka Madaxweyne Shariif & Somalia –
Qoraalkaan waxaan ugu talagalnay in aan ku ogaano ama aan ku cadeyno ahdaafka guracan ee ka danbeysa aqalka madaxtooyada Villa Somalia oo haatan xaruun u ah Madaxweyne Shariif oo beesha caalamka ay u aqoonsatay in uu yahay nin qunyar socod ah oo markii horana laga soo soocday kooxaha Islaamiyiinta ee haatan isugu soo aruuray Alshabaab.
Madaxweyne Shariif waxa uu ahaa nin aan ku seexan habeen in uu noqdo Madaxweyne balse si sahlan oo ay beesha caalamkana salka uga soo riixeyso ayuu ugu kifaaxay kursiga isagoona xiligaasi ka mid ahaa rag si dhuumaaleysi ah lagu geeyay wadanka Kenya.
Waxa uu noqday madaxweynaha Jamhuuriyada Somalia waliba KMG waana qariidadiida beesha caalamka ay horay u dhigtay, raxan taageerayaashiisa iyo ragii ay isku mowqifka ahaayeen oo ay xitaa isla aadeen Asmra ayay suurgal noqon weyday in ay ku kulmaan aqalka madaxtooyada sababo aan mudneen in xiligaan aan qodno balse siyaasada aan u badin karno.
Aala sheekh oo ahaa halka salka uu ku ceshto Madaxweyne Shariif ayaa si layaab leh u dab beeshay ayadoona xitaa ciidankii kasoo haray maxaakiimta maaliln cad lagu kala baxay lana kala raacdeeyay.
waxba yaanan ku dheereen siyaasadii 3-da sano ee la soo dhaafay balse ” boohinta Orgiga ka weyn ” madaxweyne shariif oo sida aan ognahay haatan ah madaxweyne ayaa ka badin waayay in uu soo dhaweeyo wasiirada iyo ganacsatada inta badan doonaya in ay Somalia yimaadaan taana waxa ay noqotay mid xukuumada iyo Dowlada ay la wada yaabeen.!!!! balse madaxweynaha ayaanan ilaa haatan isu arag in uu ku dhax milmayo waziirada iyo shaqadooda maada dhanka soo dhaweynta iyo qaabilaada ay tahay mid xukuumada looga fadhiyo.
Dadka odoroso siyaasada Soomaaliya ayaa sheegay in arinta ay tahay mid dhaqaalo loo kala ordayo maadaama inta badan dhaqaalaha Jamhuuriyada la siiyo loo soo mariyo dhanka hey’ada UN-ka oo ugu danbeyntii loo maareeyo qaab aad u fool xun , dhanka madaxdana waxaa la sheegayaa in ay tahay jaanis dhaqaalo sahlan lagu heli karo oo xiligaan ay ka wada faaa’ideysanayaan siyaasiyiinta Soomaalida oo caqligooda uu kusoo aruuray dhaqaalo raadis kii xil loo magacaabana uu ugu horeyntii jawaano ka buuxsado inta loo dhiibo oo la dhaho dadka wax ugu qabo.
– Yuu ka shidaa qaataa madaxweynaha? –
Madaxweyne walba oo aduunka waxa uu leeyahay la taliyaal oo inta badan ka saacideeya arimo badan oo ku furfurmo madaxweynaha ayadoona kuligooda si toos ah uga amar qaata la taliyaashaasi maadaama arinta ay tahay mid qaran oo aysan aheyn mid shaqsi wixii dhib ka yimaadana waxaa inta badan dusha loo saaraa la taliyaashaasi oo hadii la fashilmo waxaa dhacdo in arinta iskushaadheen lagu sameeyo.
Madaxweyne Shariif waxa uu leeyahay la taliyaal waxa ayna u wada badanyaihii rag ku ehel ah marka laga soo tago dhanka Qabiilka waaba kuwa ay dhanka hoose qaraabo ka yihiin waxaana dhacdo in inta badan siyaasadiisa kor u dhaafto xitaa la taliyaashaasi taa oo ah midii lagu yaqiinay siyaasiyiinta kali taliska loo yaqaano balse Shariif oo haatan dhamaad u eg waqtiga uu sii heyn doono xafiiska ayaa u ek ” nin daad qaad xunbo cuskay ” ayadoo dhawaan uu maciin ama jaanis uu ka eegtay ka mid noqaansha Jamhuuriyada Somalia East African commercial isagoona amaro aan is laheyn siiyay qunsulka u fadhiya Somalia wadanka Tanzania xiligaan oo xitaa faraha ay isla galaan Safiirka Somalia wadanka Kenya Maxamed Cali Ameerika oo ah nin wadani ah oo shacabka Soomaaliyeed habeen iyo maalin dadaal u galay.
Mudane Maxamed Cali Ameerika waa safiirka Somalia u fadhiya wadanka Kenya inta uu xilikaasi haayayna waxa uu ahaa nin si gaar loogu xasuusto dadaalo badan uu u galay dad ku xirxiran wadankaan iyo waliba dadaalo badan oo uu galay barakacayaasha ku sugan xeryooyinka wadankan Kenya isagoona dadaalkii ugu weynee ee abid lagu xasuusto uu ahaa in dhulkii Safaarada Somalida ay leheed ee wadanka Kenya oo nin Hindi uu gatay si wadanimo ay ku jirto dib ugu soo celiyay isagoo maalin walbana ku taami jiray sidii uu dib ugu soo celin lahaa dhulkaasi oo haatan lagu xuso maalmaha taariikhga ee Soomaalida ay leedahay waana dadaalkii Mudanbe Maxamed Cali Ameeriko uu u maray iyo kalsoonida uu ka kasbaday Shacabka Soomaaliyeed xiligaan.
Cali Ameeriko ayaa dhawaan ku dhaawacmay dalka Kenya waxaana kusoo booqday xili isagoo dhaawac ah Cusbitaalka Nairobi Hospital waxa uuna ka hadlayay xiligaasi uu dhaawac ahaa sidii gargaar loogu geyn lahaa dadka barakacayaasha ee ku sugan Dhadhaab gargaar dowlada Somalia ay ka heshay wadanka Liibya waana mida iga sii yaabisay xiligaasi isagoona naftiisa ka hormariyay dadka ku dhiban xeryooyinkaasi oo ii cadeysay in uu yahay muwaadin.
Madaxweyne Jamhuurada Somalia Mudane Shariif Sheekh Axmed oo ay soo dhowday xiligii uu faarujin lahaa xafiiska ayaa dhawaan waxa uu warqad u diray qunsulka Somalia u fadhiya wadanka Tanzania C/Xakiim waxaana warqdaasi ku qornaa cod ku aadan in Somalia ay ka mid noqoto East African Commercial oo xiligaan madaxweyne u yahay Madaxweyne Kibaki.
Intaas ka dib maxaa dhacay?
C/xakiin waxa uu si deg deg u aaday madaxweynaha wadanka Tanzania si warqadii loo dhiibay uu u gaarsiiyo balse madaxweynaha ayaa u sheegay in xiligaan hogaanka uu hayo madaxweyne Kibaki ayna muhiim tahay in isaga uu soo saxiixo maadaama Somalia ay ka mid tahay wadamada East Africa, C/xakim ayaa soo gaaray wadanka Kenya si warqadii uu u tusiyo madaxweyne Kibaki balse madaxweynaha ayaa ka cudur daartay waxa uuna ku wareejiyay arintaasi waziirka arimaha dibada Watangula.
Watangula ayaa weydiiyay in arintaan uu ka warhayo Cali Ameerika maadaama uu yahay Ambaasatorka Somalia u fadhiya wadanka Kenya, Cali Ameerika ayaa la weydiiyay in arintaan uu la socodo waxa uuna Ameerika wacay madaxweyne shariif uu weydiiyay in saxiixa uu yahay kiisa maadaama shaqadiisa uu haatan gacanta kula jiro masuul kale.
“ Cali hadii aanan aniga qorin yaa qoray!!!” waxa uu ahaa hadalka madaxweyne Shariif uu ugu jawaabay Cali ameeriko waxaana meesha ka sii kiismay cadaawad uu salka riixayo madaxweyne Shariif uuna isaga horkeynayo labo masuul oo laba wadan kala jooga.
C/xakim ayaa shaqadii Cali Ameerika qabtay waxa uuna saxaafada u sheegay in heshiis ay wada gaareen hogaanka East African commercial iyo dowlada Somalia.
Jahwareer hor leh ayaa ka miismay goobta 3-cisho ka dibna Cali Ameeriko waxa uu u duulay wadanka Talyaaniga si loosoo ogaado xaaladiisa caafimaad halka ay mareyso.
Maadaama safiirka wadanka uu yahay Cali Ameeriko soo kuma haboonen in madaxweynaha uu arintaasi u xil saaro Cali maadaama dowladaha aduunka ay yihiin kuwa dhanka safiirada ku kala dab qaato si arinta ay u noqoto mid si sahlan lagu xaliyo.
Waxaan weydiiyay arintaasi Sarkaal sare oo ka tirsan Villa Somalia oo diiday in magaciisa la daabaco waxa uuna ii sheegay in arinta ay tahay mid lagu doonayo in lagu wiiqo dadaalka Cali Ameeriko iyo howshiisa oo haatan u muuqato in heer wanaagsan ay u marayaan xiligaan taa oo ugu danbeyntii xitaa lagu kalifo in shaqada uu isaga tago “ Wadan ma yeelan karo labo madaxweyne” ayu ugu danbeyntii igu dhahay masuulkaasi.
Waxyaabaha lagu xanto Dowlada Somalia waxaa ka mid ah in aysan iska warqabin inta badan min madaxweyne laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaro karaani xafiis dowladeed ka shaqeeya waxaana dhacdo in inta badan dadaalka dowlada waziirada qaar ay kala socdaan dhanka warbaahinta halkii ayadoo qoraal ahaan maalin walba loogu keeni lahaa xafiiskisa mana jirto iska warqab u dhaxeeya dhamaan laamaha dowlada ee ku aadan arimaha siyaasada oo waxaa dhacdo in masuulyiinta ugu waaweyn ay wadanka inta badanka maqanyihiin.
Madaxweynaha Somalia ayaa 3-sano ka dib waxa uu u muuqanayaa in wax badan uusan ka fahmin sharciga isagoona inta badan qabta shaqada uu qaban lahaa waziir hoose taa oo dhabar jab xoog leh ku noqon doonto kuna ah howsha madaxaweynaha maadaama uu doonayo in uu howshiisa uu dhaafo waana mida laga dhaxlay mudadii 3-da sana aheyd ee uu jiray madaxweyne shariif.